Gufgaf|Online साम्राज्ञीको ईन्स्टाग्राम ह्याक !
साम्राज्ञीको ईन्स्टाग्राम ह्याक !
कलाकारहरु कति चर्चित छन् भन्ने कुरा थाहा पाउने माध्ययम हो सामाजिक सञ्जाल । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालका विभिन्न ऐपहरु मार्फत कलाकारहरु फ्यानसँग जोडिएका हुन्छन् र ती ऐपका भएका फलोअर्सका आधारका को कति हिट छ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ । नेपालमा कलाकारहरुले सर्वाधिक प्रयोग गर्ने ऐपहरुमा फेसबुक र ईन्स्टाग्राम पर्छन् । विशेष गरी महिला सेलिब्रेटीहरु ईन्स्टाग्राममा बढी सक्रिय रहेको पाईन्छ ।
नेपालका अभिनेत्रीहरुको कुरा गर्ने भने पनि उनीहरु फेसबुकको तुलनामा ईन्स्टाग्राममा सक्रिय छन् । ईन्स्टामा लाखौँ फलोअर्स भएका कारण पनी उनीहरु आफ्ना दैनिकी ईन्स्टाबाटै अपडेट गराईरहेका हुन्छन् ।
अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह पनि ईन्स्टामै बढी सक्रिय भएकी अभिनेत्री हुन् । उनलाई ईन्स्टाग्राममा ३ लाख ९७ हजार भन्दा बढीले फलो गरेका छन् । तर अहिले भने उनको ईन्स्टा अकाउण्ट ह्याक भएको छ । उनको अकाउण्ट ह्याक भएसँगै उनको ईन्स्टा अकाउण्टका सबै पोस्टहरु हराएका छन् ।
ह्याकरले एकाउन्ट ह्याक गरेर केही अश्लिल तस्बिर पोष्ट गरेर अहिले हटाएका छन् । मंगलबारदेखि ह्याक भएको उनको यो एकाउन्ट अहिलेसम्म सुचारु भएको छैन ।